Pandora zụtara Rdio ihe dị ka $ 75 nde | Esi m mac
Pandora zụtara Rdio ihe dị ka $ 75 nde
Pandora ekwuputala taa na ị zụtara n'aka ụlọ ọrụ nke Rdio site $ 75 nde, na atụmatụ ichikota teknụzụ site na ọrụ Pandora na-egwu egwu na ọrụ ya, na-echere nkwado gọọmentị na-emebu. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ na Rdio agafeela ego.
Na mgbakwunye na nnweta nke teknụzụ na ọgụgụ isi site n'aka Pandora, ọtụtụ Ndị otu Rdio ga-enye Pandora atụmatụ, nke nwere ike imechi nkwekọrịta ahụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere olile anya ịnye ahụmịhe ọhụụ na Pandora, nke a ga-ewepụta na mbubreyo 2016.
Pandora anaghị eme atụmatụ ịga n'ihu na ọrụ Rdio, kama ịzụrụ teknụzụ Rdio (gụnyere ikike), na ụfọdụ n'ime talent ya, dịka Rdio na-akụda ego wee bido mechie ọrụ ya. Nke a pụtara na Egwuregwu Apple ị na-emebi ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọrụ ahụ.
Ihe nke a pụtara maka ndị ahịa Rdio, nke na-enye egwu egwu na-akparaghị ókè gafee nyiwe adịchaghị na free otu, a ka ga-ahụ ihe ga-eme. Pandora ugbu a na-enye ihe ad-free ndenye aha gụgharia ahụmahụ na a kwa ọnwa na ndenye aha, mgbe Rdio O nwere mgbasa ozi n'efu na ndebanye aha abụọ akwụrụ ụgwọ na-ewepu mgbasa ozi, gbakwunyere ọtụtụ atụmatụ dị mkpa.
Ihe m na Pandora bu na ga-agba mbọ na-adọta Rdio na-ege ntị, na-enye ndị a onyinye, ọ ga-abụkwa ohere bụ isi maka Apple ịnakọta ndị debanyere aha ọhụrụ site na ndị ọrụ Rdio, ndị nwere ike ghara inwe mmasị na onyinye nke Pandora na-enye ha.
Ihe doro anya bụ na Egwuregwu Apple, agbanweela usoro egwu niile site na nkwanye, ebe ihe atụ n'isiokwu a 'Apple Music nwetara ala Spotify Premium',, ọbụnadị Spotify emetụtala.
Isi Iyi [Pandora]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Pandora zụtara Rdio ihe dị ka $ 75 nde
OS X 4 Beta 10.11.2 Ugbu a maka ndị mmepe
Apple Pay na-akwadozi Tesco Bank na TSB na UK